Saafi Films - News: Ururka Al shabaab oo Xalay saqdii dhexe iskaga baxay gabi ahaanba magaalada Kismaayo
Ururka Al shabaab oo Xalay saqdii dhexe iskaga baxay gabi ahaanba magaalada Kismaayo
Waxaa saaka magaalada kismaayo laga dareemayaa isbadal dhinaca maamulka ah waxaana jira hadal heyn xoog leh oo shacabku is weydiinayaan taasi oo ah goormee baxeen Al shabaab.
Meelaha lagu qaxweeyo ee kuyaalla magaalada Kismaayo ayaa saaka dad iskugu yimid oo qaarkood la hadlay Warqabadka saxaafada ayaa sheegay in magaalada gudaheeda aan saaka lagu arkeyn askari katirsan al shabaab.
Wiil dhalinyaro ah oo kusugan Kismaayo ayaa tibaaxay in dhalinyaro ay saaxiib ahaayeen kana mid ahaa al shabaab ay taleefoonadoodii dansan yihiin uuna maleynayo inay magaalada iskaga baxeen.
Xarumihii magaalada kuyaallay ee Shabaabku maamulayeen sida maxkamada,saldhiga,Xarunta Degmada kismaayo ayaa intuba waxa kusugneyn askari shabaab ah.
Dadka ayaa saadaalinaya in culeysyo badan oo soo wajahay Ururka Al shabaab ay sababtay in magaalada iskaga baxaan taasi oo kaga imaanayey ciidamada Huwanta ee Kenya,Raaskambooni iyo Kuwa Dawlada Somaliya kuwaasi oo uwada hanqal taagaya la wareegitaanka magaalada xeebta leh ee Kismaayo.
4,559,280 unique visits